नेपाल टेलिकमका ग्राहकले १०० मिनेट निःशुल्क कल गर्न पाउने, कसरी एक्टिभ गर्ने ? हेर्नुस - News 88 Post
June 11, 2021 N88LeaveaComment on नेपाल टेलिकमका ग्राहकले १०० मिनेट निःशुल्क कल गर्न पाउने, कसरी एक्टिभ गर्ने ? हेर्नुस
काठमाडौं । विश्व दूरसञ्चार दिवस को अवसर पारेर नेपाल टेलिकमले आजबाट फोरजी मा आधारित भ्वाइस ओभर (भिओ)एलटिई सेवाको परीक्षण सुरु गरेको छ । यो सेवाबाट फोरजी मोबाइल मा हाई डेफिनेसन (एचडी)भ्वाइससहित ग्राहकहरुले सेवा मा गुणस्तर थपिएको महसुस गर्न सक्ने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमको यो सेवा प्राप्त गर्न तपाईंको मोबाइल भिओ एलटीई सपोर्ट गर्ने खालको हुनुपर्छ ।
नुवाकोटमा केसी परिवारले कांग्रेसको ‘नाक’ सिध्याए, अमेरिकामा बबण्डर
गोलभेँडाले ‘शुक्रकीटको गुण बढाउन सघाउँछ’ बीबीसी रिपाेर्ट